ဝါးခယ်မ : ပက်ဂျဆန် အကြောင်း တစ်စေ.တစ်စောင်း ( ၁ )
ပက်ဂျဆန် အကြောင်း တစ်စေ.တစ်စောင်း ( ၁ )
ဒါပေမယ်. ရည်ရွယ်ချက်အစစ်ကဘာလဲ ၊ အဲ့ဒီသူတွေကဘယ်သူတွေလဲ ၊ ဘယ်လိုသမိုင်းကြောင်းတွေရှိလဲဆိုတာရယ် မြေပြင်ရဲ.လက်ရှ်ိအခြေအနေနဲ. ဘက်စုံလေ.လာမှုတွေကတော. လိုအပ်မယ်လို.ယူဆပါတယ် ။အခုတစ်လော အများစိတ်ဝင်စားကြတဲ့ မြစ်ကြီင်္းနားမြို. ကချင်နှစ်ခြင်းခရစ်ယာန်အဖွဲ.ချုပ် ( Kachin Baptist Convention – KBC ) ကကြီးမှုးပြီး ကချင်လူထုအခြပြု မူးယစ်ဆေးဝါးတိုက်ဖျက်ရေး ( Patjasan ) အဖွဲ.က ဦးဖရဲဆောင်ယော်ဦးဆောင်တဲ့ အဖွဲ.ရဲ.လုပ်ဆောင်မှုတွေနဲ.ပတ်သက်ပြီး မူးယစ်တိုက်ဖျက်မှုဆိုင်ရာ အမြင်များ ၊ အခြေခံချက်အလက်များအားစုစည်းဖော်ပြအပ်ပါတယ် ။
ဒါနဲ.ပတ်သက်လို. မောင်မောင်အောင်ကတော.သူ.ရဲ. Facebook မှာ ခုလို ရေးသားဖော်ပြတောင်းဆိုလာပါတယ်
ကချင်ပြည်နယ်ကို စစ်အုပ်ချုပ်ရေး ပေးဖို့ လိုပြီ
လွှတ်တော်ထဲ မှာ NLD အမတ်တွေ က လူထု အခြေပြု ဘိန်းခင်းဖျက်ဆီးမှုတွေ တိုးမြှင့် လုပ်ဆောင်ဖို့ထောက်ခံဆွေးနွေးကြတာနဲ့အတူ ပတ်ဂျဆန်အဖွဲ့ရဲ့လှုပ်ရှားမှုက အရှိန်မြင့်တက်လာတယ် ။ဒီကိစ္စကနောက်ကွယ်မှာဘာတွေ ရှိနေသလဲ ၊စဉ်းစားကြဖို့ကောင်းပါတယ်။ အခု ဖျက်ဆီး ခံရတဲ့နေရာ က NDAK ဇခုန်တိန့်ယွန်း ရဲ့နယ်မြေ ပတ်ဂျဆန်အဖွဲ့ကို ကြည့်၊ ဗီဒီယိုတွေ တက်နေတယ်။ပြောရရင်KIAရဲ့ပြည်သူ့စစ်လို့ပြောလို့ရတယ်၊အမျိုးသမီးတွေကိုရိုက်တယ်နှက်တယ်၊
ကိုဖျက်ဆီးတယ် ၊ဘိန်းခင်း အကြောင်းပြပြီး ဥပဒေမဲ့ လုပ်နေတာ ဖြစ်တယ်။တဖြည်းဖြည်း ISIS တို့ရဲ့လုပ်ဆောင်ချက် နဲ့ ချွတ်စွတ်တူလာတာကိုပါမြင်တွေ့လာရတယ် ၊နောက်ဆို လည်လှီးတာတွေ ၊အရှင်လတ်လတ် မီးရှို့သတ်တာတွေလာတော့မယ်။ဒီလိုလုပ်တဲ့ KIA ရဲ့ ပြည်သူ့စစ်အဖွဲ့ကို နိုင်ငံရေး ထောက်ခံမှုပေးသလို ဖြစ်သွားတယ်၊ဥပဒေမဲ့အကြမ်းဖက်လုပ်ရပ်
ခံသလိုဖြစ်သွားတယ်အစိုးရနဲ့ တပ်မတော် ကပဲ ဘိန်းခင်းတွေ အဖျက်မခံရအောင်ကာကွယ်တားဆီးနေသလိုမျိုး ရေးနေသားနေကြတယ်
ပြသနာရဲ့ ဇစ်မြစ်က NDAK ခြေကုတ်နယ်မြေကို လွှမ်းမိုးဖို့ပတ်ဂျဆန် ပြည်သူ့စစ် အားကောင်းဖို့၊ နိုင်ငံရေးနဲ့ စစ်ရေးအသာစီး ရယူဖို့ လုပ်ဆောင်လာခြင်းသာ ဖြစ်တယ်အဆုံးမှာ ဝမ်ပေါင်နိုင်ငံတော်ထူထောင်ဖို့အထိမျှော်မှန်းထားကြတယ်၊ ဒါဟာ ကြောက်စရာ အန္တရာယ်ဖြစ်လာပြီ၊ပြည်နယ် အစိုးရအနေနဲ့ နိုင်ငံရေးဖိအား၊ မီဒီယာဆန့်ကျင်မှုတွေကြောင့်လုပ်ရကိုင်ရ ခက်ခဲနေပြီဒီပြဿနာအတွက် အကောင်းဆုံး ဖြေရှင်းချက်က ကချင်ပြည်နယ်တစ်ခုလုံးကို အရေးပေါ်အခြေအနေကြေညာပြီး စစ်အုပ်ချုပ်ရေးနဲ့အုပ်ချုပ်မှ ရတော့မယ်နိုင်ငံတော်တာဝန်ရှိသူများအနေနဲ့ အလေးထား စဉ်းစားပေးပြီးတပ်မတော်ကို အုပ်ချုပ်ခိုင်းဖို့ တောင်းဆို လိုက်ရပါတယ်။
ခုကိစ္စရပ်နဲ.ပတ်သက်ပြီး သတိထားသင်.တဲ့အမြင်တစ်ရပ်ကိုလည်း Khin Maung Zaw ဆိုတဲ့ အကောင်.ပိုင်ရှင်က ခုလိုဖော်ပြရေးသားလာပါတယ်
တိုးချဲ့ဖွင့်လှစ်လိုက်ကြောင်းသိရပါတယ်..နောက်ထပ်လက်နက်ကြီးတပ် ၃ ရင်းကိုလည်းထပ်မံတိုးချဲ့ဖွဲ့စည်းလိုက်တယ်လို့ခိုင်လုံသောသတင်းများအရသိရှိရပါတယ်.ကေအိုင်အေ လက်နက်ကြီးတပ်ရင်း (၁) ကို ဦးဆောင်တာက ရင်းမှူးအဆင့်ရှိတဲ့ ဘရန်ဒွတ် ဦးဆောင်ပါတယ်...ကေအိုင်အေ လက်နက်ကြီးတပ်ရင်း(၂)ကိုတော့ ဦးဆောင်တာကရင်းမှူးအဆင့်ရှိအောင်ကျော်က ဦးဆောင်ပါတယ်..ကေအိုင်အေ လက်နက်ကြီး တပ်ရင်း(၃) ကို ဦးဆောင်တာက ရင်းမှူးအဆင့်ရှိဆင်ဝါး က ဦးဆောင်ပါတယ်..
ဒါဟာကေအိုင်အေအနေနဲ့တစ်နိုင်ငံလုံးပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်မှု ရပ်စဲရေး သဘောတူညီချက်ထဲက အခန်း (၃)၊အပိုဒ်(၅)(က)ဖြစ်တဲ့တပ်အင်အားမတိုးချဲ့ရေးဆိုတာကိုချိုးဖောက်နေတာဘဲဖြစ်ပါတယ်..လတ်တလော လှုပ်ရှားမှူ့များကိုကြည်ရရင်ကေအိုင်အေ ဟာ သူတို့ရဲ့ ပြည်သူ့စစ်ဖြစ်တဲ့ PJS အဖွဲ့နဲ့ ဘိန်းခင်းဖျက်ဆီးရေးကိစ္စအာရုံလွဲပြီးတပ်များတိုးချဲ့ဖွင့်လှစ်နေတာဖြစ်ပါတယ်..ဒါ့ကြောင့်..လွှတ်တော်ထဲက ၁၀သိန်းစား အမတ်များအနေနဲ့လည်း..ကိုယ့်ဒေသသတင်းလေးတွေစုံစမ်းပြီးမှန်မှန်ကန်ကန်နဲ့ နိုင်ငံတော်ရဲ့အကျိုးပြည်
ဒါ.အပြင် Thway Thit Sar ဆိုတဲ့အကောင်.ပိုင်ရှင်ကတော. ခုလိုသုံးသပ်ဖော်ပြထားပါတယ်
target >>>>>>>>> နယ်ခြားစေါင့်တပ် BGF
target >>>>>>>>> စခုံဒယိမ်း
မဟာဗျူဟာရေးရည်မှန်းချက်>>>>တရုပ်မြန်မာနယ်စပ်တကြောကိုထိမ်းချုပ်ရေး ယူနန်ပြည်နယ်နှင်မြန်မာအကြား buffer zone တခု ဆက်လက်တည်ရှိရေး
Legitamacy အားကောင်းတဲ့nld အစိုးရတက်လာလို့တပ်နဲ့တသားထဲပေါင်းမိသွားရင်ဒီမဟာဗျူဟာရေးလိုအပ်ချက်အဖြေကိုသဘောပေါက်လို့
KIA နယ်မြေထဲက မဟုတ်တဲ့ ဘိန်းခင်းတွေကို လိုက်ဖျက်တယ်... ဒေသခံတွေက သူတို့စီးပွား ဒုတ်နဲ့ ထိုးပြီး ထမင်းငတ်အောင်လုပ်တယ်လို့ ယူဆပြီး ခုခံကြတယ်... အဲဒီလို ခုခံလို့ ပဋိပက္ခဖြစ်တဲ့ ရွာကို အလုံးအရင်းနဲ့ ၀င်စီးတယ်... ရွာသားတွေကို ဖမ်းတယ်.. ရိုက်ကြ နှက်ကြတယ်...ဘာမှ မဟုတ်တဲ့ ရွာသူရွာသားပိုင် ပစ္စည်းတွေကို လိုက်ဖျက်စီးတယ်... ဆိုင်ကယ်ကိုတောင် တွန်းလှဲပြီး ပြသနာရှာတယ်... ပြီးရင် ဆိုင်ကယ်ပေါ်က အိတ်ကို ယူတယ်....
ဒီလို တွေ ပဋိပက္ခတွေ ဖြစ်မှာ စိုးလို့ တပ်မတော်နဲ့ သက်ဆိုင်ရာတာဝန်ရှိသူတွေက တားတယ်... ဘိန်းစိုက်နေတဲ့ နေရာကို ပြောပါ သွားဖျက်ပေးပါ့မယ် ပြောတာတောင် မရပဲ တပ်မတော်ကို အပုတ်ချ တိုက်ခိုက်ခဲ့ကြတယ်.... ဒီမိုလွှတ်တော် အမတ်တွေက အခု အဖွဲ့ဖြစ်တဲ့ PJS ကို ကာကွယ်ပေးဖို့ အဆိုတင်ခဲ့တယ်....
အခုလို မူးယစ်ဆေးဝါးတိုက်ဖျက်ရေး အဖွဲ့PJS (ပက်ဂျီဆန်) အဖွဲ့ရဲ့ စည်းကမ်းတကျနဲ့ အင်တိုက်အားတိုက် ဘိန်းဖျက်နေသော လုပ်ရပ်အား အားပေးထောက်ခံ နေကြသော ၁၀ မိနစ် လွှတ်တော်ထဲမှ ၁၀ သိန်းစား ဒီမိုအမတ်ကြီးများအား သိမြင်စေရန် တင်ပြလိုက်ပါတယ် ခင်ဗျာ...
သုံးသပ်မှု တစ်ခုကလည်း ခုလိုတင်ပြထားတာလေးလေ.လာကြည်.နိုင်ပါတယ်
ပက်ဂျီဆန်အဖွဲ့ရဲ့ လှုပ်ရှားမှု သတင်းတွေကို စောင့်ကြည့်နေခဲ့ပါတယ်...
သူတို့က ဘိန်းခင်းဖျက်တယ်ဆိုပေမယ့် ဘိန်းခင်းတိုင်း လိုက်ဖျက်နေကြတဲ့အဖွဲ့အစည်းမဟုတ်ပါဘူး.... သူတို့ နဲ့ မတဲ့ တဲ့ သူတွေရဲ့ ဘိန်းခင်းတွေကိုပဲ လိုက်ဖျက်ကြတာပါ... အထူးသဖြင့် NDAK ထိန်းချုပ်နယ်မြေထဲက ဘိန်းခင်းတွေကို ၀င်ဖျက်ကြပါတယ်... NDAK နဲ့ KIA က ကချင်လူမျိုးတွေတူပေမယ့် မတဲ့ ကြပါဘူး...
နောက်ပြီး ဘိန်း ဖြတ်ပေးတယ်ဆို ပေမယ့်လည်း သူတို့တွေ လုပ်နေတာတွေက ဘိန်းဖြတ်နေတာနဲ့ မတူပါဘူး သူတို့ (KIA) သြဇာခံ မဟုတ်တဲ့ ပြည်သူတွေ (သို့) ကြည့်မရတဲ့ တခြားတိုင်းရင်းသား ပြည်သူတွေကို လိုက်လံ ညှင်းပန်းနိပ်စက်နေကြတာနဲ့ တူနေပါတယ်...
အဲဒါကြောင့် သူတို့ ရဲ့ ရည်ရွယ်ချက်တွေက ဘာတွေဖြစ်မလဲ ဆိုတာ သိသာထင်ရှားလာပါတယ်...
၁။ NDAK ထိန်းချုပ်နယ်မြေက ဘိန်းခင်းတွေ ပျက်တော့ KIA က ဘိန်းခင်းတွေ ဈေးကောင်းမယ်...
၂။ နယ်ခြားစောင့်တပ် (သို့) ဘိန်းစိုက်တဲ့ KIA လက်ဝေခံ မဟုတ်တဲ့ ပြည်သူတွေကို ပဋိပက္ခ ဖြစ်လာရင်... တပ်မတော်နဲ့ ရန်တိုက်ပေးနိုင်မယ်....
၃။ သူတို့ သြဇာခံမဟုတ်တဲ့ သူတွေကို သူတို့ သြဇာခံ ဖြစ်လာအောင် အကြောက်တရားနဲ့ ထိန်းချုပ်နိုင်မယ်...
၄။ လက်ရှိအစိုးရနဲ့ တပ်မတော်ကို နာမည်ပျက်စေမယ်...
စတဲ့ ရည်ရွယ်ချက် မျိုးစုံတွေကြောင့် တိုက်ကွက်တွေ ဖော်နေကြတယ်လို့ ယူဆသုံးသပ်မိပါတယ်...တပ်မတော်အနေနဲ့ စစ်မီးမပွားရအောင် တားသင့်သလောက် တားခဲ့ပြီးပြီ... သို့ပေမယ့် နာမည်ပျက်တာပဲ အဖတ်တင်ခဲ့တယ်...
နောက်တစ်လပြီးရင်ပဲ သူများကို လက်ညှိုးထိုး အပြစ်ပုံချတတ်တဲ့ ငြိမ်းချမ်းရေး နိုဗယ်ဆုရှင်ကြီး ခေါင်းဆောင်တဲ့ အနိုင်ရပါတီရဲ့ အစိုးရ သစ်က ဒီပြသနာတွေကို လက်လွှဲယူရတော့မှာဖြစ်ပါတယ်... သူတို့ ရှင်းပါလိမ့်မယ်... အဲဒီအတွက် ကျနော်တို့ တပ်မတော်အနေနဲ့ စစ်မီးတွေ ဆက်မပွားစေဖို့ ကြားမညှပ်မိစေဖို့ နေတတ်ဖို့ လိုပါပြီ....
ကိုရဲမိုးကလည်း ဒီကိစ္စမှာတော်တော်လေး ပြည်.ပြည်.စုံစုံ သုံးသပ်တင်ပြထားတာကိုတွေ.ရပါတယ်
ကျွန်တော် ကျောင်းဆင်းခါစက ...လောက်ကိုင်ဒေသကို ရောက်တာ ...ကျွန်တော့် မိခင်တပ်က ခလရ ၁၂၈ ...လောက်ကိုင် - ချင်းရွှေဟော်ကားလမ်းဘေး ...တောင်ကြောကြီးတွေပေါ်မှာ တည်ထားတယ် ...တပ်က စစ်ဆင်ရေးဝင်တော့ ...ကွတ်ခိုင် - တာမိုးညဲ - မုန်းစီးခွင်ကို ၀င်ရတယ် ...ကေအိုင်အေ တပ်မဟာ ၄ ခွင်ပါ ...ဘိန်းခင်းတွေဟာ လက်ညိုးထိုးမလွဲပေါ့ ...ဘိန်းကို နေကုန်နေခန်း ...ရက်ပေါင်းများစွာ ဖျက်ဖူးတယ် ...လက်တွေနီရဲ ပေါက်ပြဲ ..အရေခွံတွေ လန်ကုန်တဲ့ အထိပဲ ...ဘိန်းဟာ မြင်လေသမျှ တောင်ကြောတွေ အားလုံး ...ပြည့်နေအောင် စိုက်ထားတာ ...တောင်ထိပ်ထိ တက်ဖို့ တင် ...နာရီပေါင်း များစွာ အချိန်ကုန်တယ် ...ထိပ်ရောက်တော့လဲ နောက်တစ်တောင် ..ပြီးတော့ နောက်တစ်တောင် ...ဘိန်းစိုက်တောင်သူပေါင်း များစွာနဲ့ လဲ ...တွေ့ ကြုံ စကားပြောဖူးတယ် ...အခင်းတွေ ဖျက်ချိန် ...တစ်ချို့ ဟာ အခင်းဘေးတင် ...ရှိုက်ကြီးတငင် ငိုကြတယ် ...တစ်ချို့ ကလဲ အနားကို မလာရဲကြဘူး ...ညနေစောင်း ကိုယ်စခန်းချတဲ့ရွာကို ပြန်တော့ ...ကိုယ်တည်းတဲ့ အိမ်က အဖွားကြီး ...ငိုယိုနေတာလဲ ကြုံဖူးတယ်
ကျွန်တော်တို့ တပ်ခွဲ ...မနက်က တက်သွားတဲ့ တောင်ကြောဟာ ...သူတို့ အခင်းရှိတဲ့တောင်ကြော ...သူတို့ ကိုယ်တိုင်စိုက်ထားတဲ့ အခင်းတွေ ...ဒီအခင်းလေး လေးငါးခုနဲ့...တစ်ရာသီစာ ထမင်းစားရမှာ ...အခု ကျွန်တော်တို့ က တက်ဖျက်ပြစ်လိုက်သတဲ့...ဘိန်းဟာ သူတို့ အတွက်တော့ ....မိရိုးဖလာ လယ်ယာလုပ်ငန်းပဲ ....သူတို့ ဒီလိုပြောလေ့ရှိတယ် ...
" လော်မီတာကွန် ( ဗမာစစ်ဗိုလ်ကြီး ) ....
ဘိန်းဟာ အစေးက ပိုက်ဆံသိပ်ရတယ် ...
အရွက်ဟာ စားလို့ သိပ်ကောင်းတယ် ...
အစေ့ကလဲ စားလို့ ရတယ် ...
အရိုးကလဲ နွားကျွေးလို့ ရတယ် .....
နင်တို့ ဘာလို့ ဘိန်းဖျက်တာလဲတဲ့..... "
ဘိန်းရဲ့ ဆိုးကျိုး အပြစ်တွေ ကျွန်တော်ရှင်းပြတော့ ...သူခေါင်းရမ်းနေတယ် ...သူ့ အဖေလဲ ဘိန်းရူခဲ့တယ် ...သူလဲ ဘိန်းရူတယ် ....ဒါဟာ သိပ်ဆိုးတဲ့ ကိစ္စလို့...ဘယ်လိုရှင်းပြပြ သူ လက်မခံနိူင်ခဲ့ဘူး ....ဘယ်လိုပဲ ဖြစ်ဖြစ် ....တာဝန်အရတော့ ဖျက်ရမှာဖြစ်ကြောင်း ...ကျွန်တော် ဆက် ရှင်းပြတယ် ...
" ဒါဆို လာမယ့်ရာသီ ...
ငါတို့ဘာသွားစားရမလဲလို့....
သူ အသံတိမ်တိမ် နဲ့ ရေရွတ်တယ် ....
ဘိန်းဖျက် စစ်ကြောင်းတွေ ...သူတို့ ရွာနားကို ...ဆိုက်ဆိုက်မြိုက်မြိုက် ရောက်လာတာဟာ ...သူတို့ အတွက်တော့ ကြမ္မာဆိုးဝင်ခဲ့ပြီပေါ့ ....ကျွန်တော်တို့ တိုင်းပြည်မှာ ...ဘိန်းကို တွင်တွင်ကျယ်ကျယ် စိုက်ပျိုးကြတာဟာ ...၁၉၅၀ ပြည့်လွန်နှစ်တွေထဲကပါ ....ဘိန်းပပျောက်ရေး နှစ်ပေါင်းများစွာ လုပ်ခဲ့တယ် ...လူမျိုးရေး ပဋိပက္ခ ...နိူင်ငံရေး ပဋိပက္ခ ...လက်နက်ကိုင် ပဋိပက္ခ ...ဒီ ပဋိပက္ခပေါင်းများစွာကြားမှာ ...ဖျက်လိုက် စိုက်လိုက် ဘိန်းခင်းတွေသာ ...သံသရာ ရှည်ခဲ့တယ် ....
ဘိန်းခင်းဖျက်ရုံနဲ့ သာ ဘိန်းပြတ်ခဲ့မယ်ဆိုရင် ...မြန်မာပြည်မှာ ...ဘိန်းအမြစ်ပြတ်တာ ကြာခဲ့ပြီပေါ့ ....တစ်ခြားက ပိုက်ဆံပေးစိုက်ခိုင်းတာပဲ ဖြစ်ဖြစ် ...ကိုယ်တိုင် စိုက်တာပဲ ဖြစ်ဖြစ် ...ဒေသခံ ရွာအများစုဟာ ...ဒီ ဘိန်း စိုက်တာနဲ့ ပဲ အသက်မွေးကြတယ် ...ဒီ ဘိန်းက အစေးကို ရောင်းပြီး ရတဲ့ငွေနဲ့...တစ်နှစ်စာ သူတို့ လိုအပ်တဲ့ရိက္ခာ နဲ့....တစ်ခြား ပစ္စည်းတွေ ၀ယ်ရတယ် ....သူတို့အခင်းတွေ ဖျက်မယ်ဆိုရင် ...ဒီ ရွာပေါင်းများစွာအတွက် ...အလုပ်အကိုင် စီစဉ်ပေးနိူင်ရမယ် ...ဒီအတိုင်းဖျက်ရုံနဲ့ကတော့ ...ဖျက်လိုက် စိုက်လိုက် သုံးလေးကြိမ်ဆို ...လက်နက်ကိုင်တပ်ထဲ ၀င်သွားတယ် ...ဆက်စိုက်တယ် ...ဒီတစ်ခါတော့ သေနတ်ကိုင်ပြီး စိုက်တာ ...
ကျွန်တော် တစ်ခုမေးပါရစေ ...လက်ရှိ ဘိန်း မစိုက်တဲ့ အဖွဲ့ထဲ ...ကေအိုင်အေ ပါပါသလား ?ကိုးကန့် ပါပါ သလား ?o ပါပါသလား ... ?ရှမ်းနီပါပါသလား ရိုးရိုးသားသားသား ဖြေကြည့်ပါ ...အခု ဘိန်းတွေ လိုက်ဖျက်နေတဲ့ပတ်ဂျဆန်ကို ...ကေအိုင်အေ က ကျောထောက်နောက်ခံ ပြုမပြု ...ရိုးရိုးသားသား ဖြေကြည့်ပါ ....ဘိန်းစိုက်တဲ့ သူ အတူတူချင်း ...ကေအိုင်အေ ဘိန်းခင်းကျတော့ မဖျက်ဘဲ ...NDAK ရဲ့နယ်မြေထဲက ဘိန်းခင်းကို ၀င်ဖျက်တာဟာ ...သဘာဝ ကျပါရဲ့ လား .... ?
ဘိန်းစားတဲ့သူ အချင်းချင်း ....ရှမ်းနီရွာတွေကို အုပ်စုနဲ့ဝင်ဖမ်းပြီး ....ရိုက်တာနှက်တာ ...အပြစ်ပေးတာတွေ လုပ်နေတာတွေဟာ ....မှန်ပါရဲ့ လား ... တရားမျှတပါရဲ့ လား ?ပြည်သူလူထု အခြေပြု ဘိန်းဖျက်အဖွဲ့ ဟာ ...အခု နှစ်ပိုင်းမှ ဘာလို့ထပြီး ဘိန်းဖျက်ရတာပါလဲ ...အခုအချိန်ပိုင်းမှ ဘာလို့ ထပြီး ဘိန်းဖျက်ရတာပါလဲ ...?အရင်က ဘာလုပ်နေလို့ ပါလဲ ?
မူးယစ်ဆေးကဏ္ဍမှာ ...အုပ်ချုပ်ရေးပိုင်းဆိုင်ရာ ၀န်ထမ်းတွေ ပါဝင်ပတ်သက်နေရင် ...အရေးယူပါ ထောင်ချပါ လက်ခံပါတယ် ...တပ်က ပါဝင်ပတ်သက်တယ်ဆိုရင်လဲ ...ပြင်းပြင်းထန်ထန် ထောင်ချပြစ်လိုက်ပါ ကျေနပ်ပါတယ် ...သို့ သော် ... ခင်ဗျားတို့အခုလုပ်နေတဲ့ ကိစ္စဟာ ...သိပ် အန္တရာယ်များပါတယ် ...လူမျိုးရေး ပြသနာကို ဦးတည်နေပါတယ် ...ပြည်နယ်တွင်း မတည်ငြိမ်မှုကို ရှေ့ ရူနေပါတယ် ....ကေအိုင်အေ နဲ့ ရှမ်းနီတွေဟာ ...နဂိုတည်းက ရန်စရှိနေတာပါ ...စစ်ပြန်ဖြစ်လာရင် ဘယ်ငတိမှ ...ဘိန်းဖျက်လိုက်ရန် ခေါ်လို့ မရနိူင်ပါ .....
အစိုးရ အဟောင်းဟာ နောက်တစ်လဆို ဆင်းပါပြီ ...အဲဒီအခါ ဒီ ဘိန်းဖျက်တဲ့ကိစ္စကို ...ခင်ဗျားတို့ စိတ်တိုင်းကျ ကိုင်တွယ်လိုက်စမ်းပါ ...ကချင်ပြည်နယ်တစ်ခုလုံးက ဘိန်းခင်းတွေ ...ခင်ဗျားတို့ အစိုးရဦးစီးပြီး ....အနုမြူဗုံးပါ ခွဲပြစ်လိုက်စမ်းပါ ...မသမာမူတွေ လာဘ်စားမှုတွေ ထောင်ချပြစ်လိုက်စမ်းပါ ...လက်ခုပ်တီးပြီး အားပေးပါတယ် ...သို့ သော် အခုမှ ခါတော်မီ ဘိန်းထဖျက်နေတဲ့....စည်းလွတ်ဝါးလွတ် ဒီ ပတ်ဂျဆန်လိုကောင်ကို ...လွှတ်တော်မှာ အရေးကြီး အဆိုတင်ပြီး ...အကာအကွယ်ပေးဖို့ လုပ်လိုက်တာဟာ ...ခင်ဗျားတို့ သိပ်မှားသွားပြီ လို့ ပဲ ဆိုချင်ပါတော့တယ် ....
သိတဲ့ လူက ၀င်ပြောချိန် ...နယ်မြေ အနေအထား နဲ့....သမိုင်းကြောင်း နားလည်တဲ့တပ်မတော်က ၀င်တားချိန် ...ဘိန်းဖျက်တာ ၀င် တားရမလား ဆိုပြီး ...၀ိုင်း အသံကောင်း ဟစ်ကြပါတယ် ...ဘိန်းဖျက်တာကို တားနေတာ မဟုတ် ...ဒီဘိန်းဖျက်မှုဟာ ထိလဲ မထိရောက် ...အကျိုးထက် အပြစ်ကိုသာ ပိုဖြစ်ပြီး ...ပြည်နယ်တွင်း မတည်ငြိမ်မှု နဲ့...လူမျိုးရေး ပဋိပက္ခကို ဦးတည်လာနိူင်ဖွယ် ရှိလို့...တပ်က ၀င်တားခဲ့ခြင်း ဖြစ်ပါတယ် ....သို့ သော် လွှတ်တော် အသစ်က လက်မခံခဲ့ဘူး ...တပ်မတော်သား အမတ်တွေက ...ပတ်ဂျဆန် အဖွဲ့လုပ်နေတဲ့ကိစ္စတွေကို ...အထောက်အထားတွေနဲ့...မနေ့ က လွှတ်တော်မှာ ရှင်းပြကြပါတယ် ...မရပါဘူး .... လက်မခံပါဘူး .....ဒါဆိုလဲ ပြီးတာပါပဲ .....တားစရာ အကြောင်း မရှိတော့ပါဘူး ...နောက်များမကြာမီ ခင်ဗျားတို့...ကိုယ်မွေးတဲ့ မျောက် ...ကိုယ် ပြန်ခြောက်တဲ့ ဘ၀ ရောက်ပါလိမ့်မယ် ....
ပျက်သွားတဲ့ဘိန်းခင်းအရေအတွက် နဲ့...မမျှတဲ့ပြသနာတွေ ...ခင်ဗျားတို့ ဆက်ရှင်းရပါတော့မယ် ...အဲဒီအခါကျမှ ...အခုလုပ်ရပ်ကို ကို အားပေးအားမြောက်ပြုခဲ့တာ ..ခင်ဗျားတို့ သိပ်မှားသွားကြောင်း ...နောင်တတွေ တသီကြီးနဲ့သိလာပါလိမ့ယ် ...Good Luck ...ကံကောင်းပါစေ အစိုးရအသစ်ကြီး ..
အဟက် ...ပတ်ဂျဆန်အဖွဲ့ ကို မတားဖို့...ဒီနေ့ပြည်သူ့ လွှတ်တော်မှာ ....ဝိုင်းမော်မြို့နယ် ပြည်သူ့လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ် ....ဦးလဂမ်ဇယ်ကျူံး က ...အရေးကြီး အဆိုတင်သတဲ့ကိုယ့်လူတို့...သတ်ပါစေ ... သေပါစေ ...လွှတ်ပေးလိုက်ကြပါ ...တပ်မတော်က ကြားက ....နာမည်ပျက် ခံမနေပါနဲ့ တော့ ....နောက်လာမယ့် ...NLD အစိုးရအဖွဲ့ ကြီး ဆက်ရှင်းပါစေ ....ပြောင်းလဲချိန် တန်ပြီ ...
ဒါ.အပြင်သက်ဆိုင်ရာများ ၊ ဒေသဆိုင်ရာ အာဏာပိုင် နဲ.တာဝန်ရှိသူများသတိပြုနိုင်ရန်လည်း ခုလိုရေးသားထားပါတယ်
ကချင်ပြည်နယ်က...၀ိုင်းမော်၊ ချီဖွေ ၊ တနိုင်း၊ ပူတာအို ...ဆွမ်ပရာဘွမ်၊ ဖားကန့်စတဲ့မြို့နယ်တွေမှာ ...ဘိန်းခင်းတွေ ရှိနေတယ် .....၀ိုင်းမော် နဲ့ ချီဖွေက ဘိန်းခင်းတွေက ....NDAK ဆခုန်တိန့် ယန်း ရဲ့နယ်မြေထဲမှာ ....တနိူင်း ၊ ပူတာအို ၊ဆွမ်ပရာဘွန် ၊ ဖားကန့်က ဘိန်းခင်းတွေက ...ကေအိုင်အေ ရဲ့နယ်မြေထဲမှာ ....ဘိန်းဖျက်တာကို ဦးစီးတာက ပတ်ဂျဆန် အဖွဲ့...ပတ်ဂျဆန် အဖွဲ့ ကကချင်ခရစ်ယာန် အဖွဲ့ တွေ ဦးစီးဖွဲ့ တာ ..ပြည်သူ့ စစ်ပုံစံ ဖွဲ့ ထားတယ် ...ယူနီဖောင်းဝတ်တယ် ၊ စစ်ဦးထုပ်ဆောင်းတယ် ...စကားပြောစက်တွေကိုင်တယ် ....ကေအိုင်အေ နဲ့ ပတ်သက်ဆက်နွယ်မှု ...အကြီးအကျယ် ရှိနေတယ် ...
ပတ်ဂျဆန်ရဲ့လုပ်ရပ်တွေနဲ့ပတ်သက်လို့...တိုင်ကြားစာတွေ အမှုဖွင့်တာတွေလဲ အများကြီး ရှိတယ် ...ရှမ်းနီရွာတွေကို ၀င်ဖမ်း ...၀င်ရိုက်တာတွေ လုပ်ကြလို့...ရှမ်းနီတွေဘက်က ...လူထုအစည်းအဝေးလုပ်ပြီး ကန့် ကွက်တာ ...အစိုးရအဖွဲ့ ကို တိုင်ကြားတာတွေ လဲ ရှိတယ် ...ပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းက တက်လာတဲ့Movie တစ်ခုမှာ ...မူးယစ်ဆေးသုံးစွဲသူတွေလို့ ဆိုတဲ့သူတွေကို ...ပတ်ဂျဆန်တွေက ....တုတ်နဲ့ အားရပါးရရိုက်နေတဲ့ပုံတွေပါတယ် ...အမျိုးသမီးတွေလဲပါတယ် ...အမျိုးသမီးတွေကို ရိုက်တဲ့ အချိန် ...ပတ်ဂျဆန်တွေဟာ ....ဘေးက မျောက်လို အော်ဟစ်ရယ်မောနေတယ် ...ရိုက်ခံရတဲ့အမျိုးသမီးကြီး တစ်ယောက် ...ငိုယိုနေတဲ့ပုံတွေလဲ ပါတယ် ...
ဆိုလိုတာက ...ဘိန်းဖျက်တာဟာ ပြသနာမဟုတ် ...ဒီ ဘိန်းဖျက်တဲ့ လှုပ်ရှားမှုကို ...ဦးစီးနေတဲ့ ပတ်ဂျဆန်က ပြသနာ ...ဘိန်းဖျက်တာက ပြသနာ မဟုတ် ...ဘိန်းဖျက်တာကို အကြောင်းပြပြီး ...စည်းလွတ်ဝါးလွတ် လုပ်နေတာက ပြသနာ ....ဘိန်းဖျက်တာက ပြသနာ မဟုတ် ...ကေအိုင်အေ ရဲ့ ရန်ဘက် ....NDAK ရဲ့နယ်မြေထဲကို ...ဦးတည်ပြီး ချီတက်နေတာက ပြသနာ ...( ၂၀၁၂ က ...NDAK ရဲ့နယ်ခြားစောင့်တပ်ရင်း တစ်ခုကို ....KIA က အလုံးအရင်းနဲ့ ...၀င်တိုက်ခဲ့တဲ့ဖြစ်စဉ်ရှိထားတယ် )
ပတ်ဂျဆန် ရဲ့လှုပ်ရှားမှုဟာ ...တဖြည်းဖြည်း နဲ့နိူင်ငံရေးလှုပ်ရှားမှု ...လူမျိုးရေး လှုပ်ရှားမှု အသွင်ဆောင်လာတယ် ...ပထမ လူလေး နည်းနည်း ...အခု နှစ်ထောင်လောက် ဖြစ်လာနေပြီ ....နောက်ဆုံး အခြေအနေတွေကတော့ ...မနေ့ က ဆက်မသွားဖို့ တားထားတဲ့...ပတ်ဂျဆန်အဖွဲ့ တွေကို ..တပ် နဲ့ရဲ က တပ်ဖွဲ့ တွေ အစောင့်လိုက်ပြီး ....သွားခွင့် ပြုလိုက်ပြီ ....ထူးဆန်းတဲ့ တစ်ချက်က ...ဒီ ပတ်ဂျဆန် လုပ်ရပ်ကို ...အားပေးအားမြှောက် ပြုနေတဲ့ငှက်တစ်ချို့ ကိုလဲ ...အတော်လေးတွေ့ ရတယ် ....
နောက်တစ်လကျော်ဆို ကချင်ပြည်နယ်မှာ ....NLD အစိုးရ တက်တော့မယ် ....အဲဒီအခါ ဒီ ပတ်ဂျဆန်ကပဲ ...ပြည်နယ်အစိုးရကို ...ပြသနာပေါင်း သောင်းခြောက်ထောင် ဆက်ပေးမှာကို ....မမြင်နိူင်တော့လောက်အောင် ...အသိတရားကင်းမဲ့ နေတဲ့တစ်ချို့ ငှက်တွေရဲ့...ငှက်ခေါင်းကိုလဲ အတော်လေး အံ့ သြမိတယ် ...မြှောက်တုန်းက အားကြိုးမာန်တက် မြှောက်ပေးခဲ့ပြီး ...နောင် လူမျိုးရေး အဓိကရုဏ်းတွေ ဖြစ်ကြမှ ...ကေအိုင်အေ နဲ့NDDK ....တိုက်ပွဲတွေ အကြီးအကျယ် ပြန်ဖြစ်မှ ....ကချင်ပြည်နယ် ငှက်အစိုးရ ၀ရုန်းသုန်းကား ပြန်ဖြစ်မှ ....ပတ်ဂျဆန်ကို ဆန့် ကျင်ကြ ....ထလုပ်ရင်တော့ ...အချိန်အတော်လေး ....နောက်ကျသွားပြီလို့ ပဲ ဆိုရတော့မယ် ...ခင်ဗျားတို့ငှက်ခေါင်း ...ဖွတ်ခေါင်းထက် ပိုမဆိုးပါစေနဲ့ ဗျား ..... ။
Data from မောင်မောင်အောင် , Khin Maung Zaw , Thway Thit Sar & Ye Moe
Posted by ဇာမဏီ at 10:06 AM
ပက်ဂျဆန် အကြောင်း တစ်စေ.တစ်စောင်း ( ၂ )